Laptọọpụ ASUS kacha mma, kedu nke ị ga-azụta na 2022?
ASUS bụ ụlọ ọrụ Taiwanese nke e hiwere na 1989. N'oge ndụ ya dị mkpirikpi, ọ ghọwo ihe nrụtụ aka na mpaghara dị iche iche, dị ka robotics ma ọ bụ ngwá electronic, ma ebe ọ na-ewu ewu bụ na ngwaike. Dị ka ụlọ ọrụ Eshia, ọ bụ otu n'ime ụdị kọmputa na-enye uru kacha mma maka laptọọpụ ego na Asus laptọọpụ kwesịrị mgbe nile ịbụ nhọrọ na-atụle. N'isiokwu a, anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu ndị a.
1 Laptọọpụ ASUS kacha mma
1.4 ASUS TUF Egwuregwu
2 Kọmpụta ASUS ọ dị mma?
3 Ụdị kọmpụta ASUS
3.1 Akwụkwọ ZenBook
3.3 Egwuregwu ROG
3.4 Egwuregwu TUF
3.6 Usoro E
3.7 Laptọọpụ ASUS
4 A na-eji ihe nhazi eme ihe na laptọọpụ Asus
4.1 Core i3 ma ọ bụ Ryzen 3
4.2 Core i5 ma ọ bụ Ryzen 5
4.3 Core i7 ma ọ bụ Ryzen 7
5 Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ ASUS dị ọnụ ala?
6 Asus laptọọpụ maka ọrụ
6.2 Akwụkwọ ZenBook
6.4 Ụlọ ọrụ Chromebook
7 Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ ASUS agaghị amalite?
8 Asus laptọọpụ, echiche m
9 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ ASUS
9.2 Ụlọikpe Bekee
Laptọọpụ ASUS kacha mma
ASUS VivoBook 14 bụ a kọmputa nwere uche na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. O nwere nkọwa zuru ezu maka ụlọ na ọkachamara, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume iji nweta ya ọbụna na Intel Core i7 processor. Ihe nhazi ntọala bụ Intel Core i5, 8GB nke DDR4 RAM na draịvụ ike 512GB SSD ga-akpali sistemụ arụmọrụ na ngwa nke ọma n'enweghị nsogbu.
Nwere a 14 anụ ọhịa ahụ nke anyị nwere ike ịrụ ụfọdụ ọrụ ma ọ bụ lelee ọdịnaya multimedia dị mma karịa na ihuenyo ndị ọzọ dị nta, ma ọ nwere mkpebi nke 1366 × 768 nke na-abụghị maka, dịka ọmụmaatụ, edezi ihe oyiyi.
Sistemụ arụmọrụ arụnyere na ndabara bụ Windows 10 Ụlọ na ọnọdụ 64-bit S nke, n'echiche m, dị mma karịa ụdị nke gara aga.
ASUS ZenBook 14 bụ kọmpụta nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ọ bụla na mgbaze. ya Intel Core i5 ma ọ bụ i7, nke 8GB nke RAM na 512GB SSD draịvụ ike na-akwado, ga-enye anyị ohere ịmegharị sistemụ arụmọrụ yana ngwa na-achọsi ike n'ụzọ dị nro. Ọ bụrụ na ịchọrọ Ryzen, enwerekwa.
La Ihuenyo agụnyere na laptọọpụ a bụ 14 ″, nke, tinyere 1.4kg arọ ya, na-eme ka ọ bụrụ ezi "mkpọtụ" n'echiche na ọ dị mfe iburu gị ebe ọ bụla. Mkpebi ya bụ 1920 × 1080 Full HD, ihe, tụkwasị m obi, ozugbo ịnwale ya, ị gaghị achọ ihe ọ bụla n'okpuru.
Nke a ASUS ZenBook na-abịa na Windows 10 Ụlọ 64bit arụnyere na ndabara.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọzọ ngwa ngwa na vasatail, ị ga-elele ASUS VivoBook Flip. Ọ bụ ezie na, dị ka ndị ọzọ, o nwere 8GB nke RAM na 256GB SSD ike draịva, ọ na-agụnye a ike karịa Intel Core i3 quad-core processor ruo 2,1GHz nke anyị nwere ike imeghe ngwa fọrọ nke nta ozugbo.
Isi uru nke kọmpụta a bụ na ọ bụ ihe ngbanwe nke 2-in-1.
ASUS VivoBook tụgharịa ...
Kaadị eserese bụ 2GB Intel Graphics nke anyị nwere ike iji kpọọ utu aha dị mma, mana anyị ga-eme ya na ihuenyo nwere mkpebi HD zuru oke. N'ọnọdụ ọ bụla, ASUS a na-achọ ịnye ụfọdụ ike n'emeghị ka ọnụ ahịa ya buru ibu.
Sistemu arụ ọrụ na-abịabu arụnyere bụ Windwos 10 Home.
ASUS TUF Egwuregwu
Ọ bụrụ na ị na-achọ a kọmputa igwu egwu na ezigbo ọnụ ahịaLelee ASUS TUF Gaming FX15. Maka ọnụ ahịa mbelata ma e jiri ya tụnyere kọmputa ndị ọzọ "ịgba chaa chaa", ọ na-enye anyị ezigbo processor, 16GB RAM na ihe dịka 512GB na SSD ebe anyị nwere ike itinye ọtụtụ egwuregwu dị arọ. Ọ bụrụ na 16GB nke RAM yiri ka ọ dị ntakịrị maka egwuregwu gị, enwere ike ịgbasa ya ruo 32GB.
La Ihuenyo nke gụnyere akụrụngwa a bụ Full HD (1920 × 1080), yabụ ọdịnaya ga-ele anya nke ọma na 15.6 ″.
Nkọwa dị mkpa: ọ na-abịa na-enweghị sistemụ arụmọrụ, ihe ha na-eme iji zere ịba ụba ọnụ ahịa ntakịrị site n'ịkwụ ụgwọ ikikere na Microsoft.
Ma ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye na-egwu egwuregwu, laptọọpụ nwere ike ịba uru bụ ASUS ROG. Maka mmalite, ọ na-abịa na a 1920 × 1080 Full HD IPS ihuenyo, na ọnụego ume ọhụrụ nke 300Hz yana nchapụta nke 300nits, ha niile dị na 15.6 ″.
Banyere arụmọrụ ma ọ bụ ike ya, anyị nwere processor Ryzen 7 Nke ahụ agaghị ada ada, na ọbụna karịa ma ọ bụrụ na anyị atụle na ọ gụnyere 16GB nke DDR4 RAM (gbasaa na 32GB). Mbanye ike bụ 512GB, mana site na SSD nke na-eme ka ọsọ ọgụgụ / ide ihe dịkwuo mma.
Akụrụngwa a na-abịa na-enweghị sistemụ arụmọrụ, nke na-ezere na agbakwunyere ọnụahịa ahụ ntakịrị mgbe ị na-akwụ ụgwọ ikikere na Microsoft. Ọzọkwa, ha ga-akwụ ụgwọ maka ọnụahịa nke ndịna-emeputa kaadị, a NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB DDR6 nke zụtara iche nwere ọnụ ahịa karịrị € 500.
Kọmpụta ASUS ọ dị mma?
N'ozuzu, Ee ha bụ. ASUS bụ otu n'ime ha ụdị laptọọpụ nke na-eme kọmputa maka mmasị na mkpa niile. Ha nwere ogo dị mma / ọnụahịa ma na-emekarị nke ọma, ihe a na-ahụkarị na ahụigodo. N'ụzọ ezi uche dị na ya, n'ime katalọgụ ya buru ibu, anyị ga-ahụ kọmpụta ndị nwere ọgụgụ isi karịa, nwere nkọwa ndị akọwapụtara nke ọma, nke nwere ike ọ gaghị egbo mkpa onye ọrụ na-achọsi ike, mana anyị ga-ahụkwa kọmpụta ndị ọzọ dị oke ọnụ nke ga-enye anyị ohere ịme ihe niile na-emecha nke ọma.
Onwe ya, ASUS bụ akara nke na-amasị m, na na ọ nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme na anyị nwere ike ịchọta ụdị kọmputa dị iche iche, n'ogo ọ bụla na ihe niile nwere ole na ole. ezigbo emecha, ya bụ, ha anaghị agụnyekarị mmejọ imewe.
Ụdị kọmpụta ASUS
Asus 'ZenBook usoro na-eburu ihe a maara dị ka Ultrabooks. Enwere ụdị na-amalite na 12 ″, nke gụnyere ihe nchekwa ike mana enweghị njikọ ụfọdụ (dịka ọdụ ụgbọ mmiri). Ihuenyo kachasị na ZenBook bụ 15.6 inch.
Enwere ike ịsị na ha bụ ndị dị ka MacBook Air nke Apple, ya bụ, ngwá ọrụ ọkụ maka ụlọ na-enweghị nnukwu uru. Ya mere, e bu n'obi ha maka ndị ọrụ na-achọghị ịbụ ọkachamara ma ọ bụ onye na-achọ ọrụ na laptọọpụ ndị a ma chọọ akụrụngwa na-adịghị arọ nke ukwuu.
N'ime oke Asus ZenBook, enwere ụdị dị iche iche:
65W chaja enwere ike...
Ihe ntụgharị ZenBook bụ un 2 n'ime 1 laptọọpụ, nke pụtara na anyị nwere ike iji ya dị ka kọmputa desktọọpụ na dị ka mbadamba. Sistemụ arụmọrụ ọ na-eji bụ atụmatụ Microsoft na n'afọ ọ bụla na-agafe na-agbakwunye ọrụ mmetụ ọzọ na ngwanrọ ya, yabụ anyị nwere ike iji stylus see (nwere oke), jiri ụdị mbadamba nkume ya n'ụzọ kachasị mma ma ọ bụ rụọ ọrụ nke ịkpọ oku na ekwentị gị. Ihe nchọgharị weebụ Edge, n'etiti ihe ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, pụtara otú ọ na-agbanwe agbanwe, ebe ọ bụ na anyị nwere ike itinye ihuenyo n'akụkụ ọ bụla, ruo n'ókè nke ịtụgharị ya na ihu na iji laptọọpụ dị ka a ga-asị na ọ bụ foto foto. Banyere ihe ọ gụnyere n'ime, anyị nwere ike ịhụ ya n'ụdị atọ, abụọ n'ime ha nwere Intel processors na nke ọzọ nwere ihe nrụpụta AMD.
Ogo nke ihuenyo dịgasị n'etiti 13.3 "maka ụdị Intel na 14" maka ụdị AMD. Ha niile na-eji sistemụ arụmọrụ Windows 10 Home Na e mere ha na ndị na-emezu ma ọ dịkarịa ala ihe abụọ chọrọ n'uche: ha chọrọ ihe dị ike karịa nkezi na ihuenyo mmetụ nke na-emepe ụwa nke ohere.
Ihe ọ bụla nwere akara ma ọ bụ aha nna "Pro" bụ maka ndị ọrụ na-achọsi ike karịa ka ọ dị. ZenBook Pro abụghị kọmputa kachasị ike nke akara Taiwanese, mana ọ gụnyere ihe ndị dị n'ime nke ga-eme ka ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla anyị na-enweghị ike ime, na ihe a niile na kọmputa nwere ezigbo nhazi nke naanị Pro akụrụngwa na-enyekarị. . Mana ọ gụnyekwara a ihuenyo mmetụ, yabụ anyị nwere ike iji ya, dịka ọmụmaatụ, jiri stylus rụọ ọrụ imewe ma ọ bụ akara ibe weebụ ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị kachasị amasị anyị bụ Microsoft's Edge.
Na-ekwu maka ihuenyo, na Laptọọpụ a nwere mkpebi nke 4K, nke na-emesi echiche ahụ ike na ọ bụ nhọrọ dị mma maka ndị ọkachamara nke mbipụta nke ọdịnaya multimedia, ma eleghị anya karịa maka ndị ọrụ ha nwere njikọ na ịmepụta na mbipụta nke ihe oyiyi ma ọ bụ ndị na-amu amu foto. Ma ọ bụ 15.6-inch, nke pụtara na anyị nwere ike ịrụ ọrụ na kọmpụta dị ọkụ, na-eji ezigbo nhazi, ihuenyo dị mma na ihe a niile na-eji a. ezigbo arụmọrụ, nke na-enyere aka na ọ nwere processor dị ike na RAM dị mma. Ma ọ bụrụ na n'ikpeazụ ị ga-echekwa ọtụtụ ọrụ dị arọ, wetuo obi, n'ihi na ọ nwere diski ike 1TB nke ga-adabara ihe niile, na mgbakwunye na ịdị ngwa ngwa n'ihi na ọ bụ SSD niile.
ASUS ZenBook 13 OLED…
ZenBook S bụ kọmputa nke ASUS etinyewo uche na nhazi ahụ. Emere ya nke ihe kacha mma ma ha jisiri ike mepụta kọmpụta dị gịrịgịrị ma dị mfe, ihe ọ na-enye aka na ihuenyo ya dị sentimita 13 ma ọ bụ 14, ọ bụghị 15.6 dabara na nha ọkọlọtọ. Eziokwu ahụ na ọ na-ebuli ihuenyo mmetụ ka dị mkpa, na ọbụnadị obere ma ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ arụmọrụ dịka Windows 10 nke na-enye ọtụtụ nhọrọ maka ụdị ihuenyo a, gụnyere ọnọdụ mbadamba ya na ndakọrịta na ụdị stylus niile.
N'iburu n'uche nha ya, ibu ya, ihe nhazi ya na na ihuenyo ya na-emetụ aka, ọ dị mfe iche na e mere ya na ndị chọrọ ya n'uche. un laptọọpụ ịrụ ọrụ pụọ n'ụlọ nke dị ike ma na-agbanwe agbanwe, dị ka ndị ọkachamara ndị ga-ekpuchi akụkọ ihe mere eme, kamakwa maka ndị chọrọ na-arụ ọrụ na dịtụ ike software n'ebe ọ bụla. N'ezie, a haziri ya maka ndị na-achọ laptọọpụ na-emecha ihe dị elu.
VivoBook bụ usoro kọmpụta ASUS nke anyị ga-ahụ ụdị laptọọpụ niile, n'ime nke anyị ga-enwe ndị nwere ya. Ihe ngosi 4K. Ha na-abụkarị akụrụngwa dị mma ezubere maka ojiji ndị ọkachamara.
ASUS ROG bụ egwuregwu laptọọpụ ahaziri maka ndị egwuregwu. Acronym na-anọchi anya Republic of Gamers, na n'ime katalọgụ ya, anyị ga-ahụ akụrụngwa nwere ngwaike emebere naanị na naanị maka egwuregwu, nke na-agụnyekarị ndị nrụpụta ka mma, RAM karịa na draịvụ ike SSD.
ASUS TUF bụ kọmpụta dị iche iche nke nwetagoro ọtụtụ ihe nrite. Mana iji bụrụ nke ọma, ihe TUF bụ n'ezie bụ motherboard gị. The acronyms si na "The Ultimate Force" na na TUF nso anyị ga-ahụ kọmputa na components e mere ka egwu na-esonyere a ọzọ "ike ike" imewe, nke mgbe ụfọdụ na-agụnye ọkụ n'akụkụ dị iche iche nke ngwá, dị ka keyboard.
N'ime oke TUF, anyị nwere ike ịchọta Laptọọpụ egwuregwu dị ọnụ ala n'okpuru € 1000
Emebere ProArt StudioBook ka ị nwee ike ịrụ ụdị ọrụ ọ bụla na-efunarị ihe ọ bụla. N'ezie, anyị nwere ike ịsị na anyị na-eche flagship nke ika Taiwanese ihu. Ha nwere ụfọdụ kaadị eserese kacha mma sitere na NVIDIA, yana ọhụrụ na penultimate ọgbọ processors na RAM na nchekwa nchekwa nke ga-enye anyị ohere ịmepụta ọdịnaya multimedia na nnukwu ọsọ ọsọ. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na ihe niile anyị ga-ahụ na anyị nwere ike ịnụ ụtọ na mkpebi ruo 4K, dị oke mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ nkenke na oyiyi ahụ na agba ya.
Site na ike a, na imewe nke na-enweghị ihe ọ bụla echekwara, usoro kọmputa a abụghị maka onye ọrụ nkezi, mana maka ihe na-achọsi ike. Kpọmkwem, m ga-ekwu na ọ ga-abụrịrị otu n'ime nhọrọ ndị ha ga-eburu n'uche ndị ọkachamara, ebe ọ bụ na ha bụ otu n'ime ndị ole na ole ga-enwe ike imezi ọnụ ahịa dị elu karịa laptọọpụ ndị ọzọ. Sistemụ arụmọrụ ha na-eji bụ Windows 10 Pro, nke ị maralarị ihe ọ pụtara: ị gaghị echefu sọftụwia ọ bụla n'ahịa.
ASUS E usoro metụtara ịdị mma. N'usoro isiokwu a, anyị na-ahụkarị kọmpụta nwere ahụigodo ka mma, pad touchpad buru ibu yana nke ka mma n'ozuzu ya. N'aka nke ọzọ, ha bụ otu ndị nwere nnwere onwe ka mma, yabụ anyị ga-enyocha nzụta gị ma ọ bụrụ na anyị ga-anọ ogologo oge n'ebe obibi. Ezubere ha maka ndị na-amasị mmetụta dị mma, ma na oyiyi na ụda na aka.
Laptọọpụ ASUS gụnyere kọmpụta niile nke ika Taiwanese. N'ime ha anyị na-ahụ ma kọmputa ndị nwere ụfọdụ ụdị Windows arụnyere na ndabara yana ndị gụnyere Chrome OS. Ndị gụnyekwara bụ Republic of Gamers ma ọ bụ kọmputa egwuregwu vidiyo The Ultimate Force.
na Chromebook ASUS bụ kọmpụta sitere na ụlọ ọrụ Taiwanese na-eji sistemụ desktọpụ Google. Ụdị ASUS nke ikpeazụ ga-ere ahịa bụ na 2017 na, dị ka Chromebook niile, na-eji Chrome oS, Sistemu eji arụ ọrụ emebere maka kọmpụta na-enweghị nnukwu akụrụngwa na nke ahụ bụ ihe nchọgharị Chrome nke anyị na-eji ngwa Google. Ezubere ha maka ndị ọrụ na-elekwasị anya na webụ ọrụ ha.
A na-eji ihe nhazi eme ihe na laptọọpụ Asus
Laptọọpụ ASUS nwere ọtụtụ ụdị nwere ụdị nhazi dị iche iche, iji mejuo ụdị ndị ọrụ na akpa dị iche iche. Ndị a nwere ike ịbụ:
Core i3 ma ọ bụ Ryzen 3
Ọ bụ ọkwa ntinye, ma ọ bụ ọkwa ntinye, bụ nke kachasị ọnụ ala na nke kachasị arụ ọrụ ma e jiri ya tụnyere ụmụnne ha ndị okenye 5 na 7. Ndị nhazi ndị a dị mma maka ndị na-achọ kọmputa bụ isi na nke dị ọnụ ala, nke nwere ike ịme ngwa ngwa multimedia. ., igodo, akpaaka ụlọ ọrụ, wdg. Na mgbakwunye, ibe ndị a nwekwara obere oriri, ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ na obere oge yana obere cores, yabụ nnwere onwe nwere ike ịka mma.
Core i5 ma ọ bụ Ryzen 5
Ọ bụ usoro dị n'etiti n'etiti 3 na 7, nke pụtara na ọ ga-enwekwa arụmọrụ n'etiti abụọ ahụ, ọnụahịa ya dịkwa n'etiti. Ọ bụ oke a na-ahụkarị, nke akwadoro maka ọtụtụ ndị ọrụ. Site na ha ị nwere ike iji sọftụwia dị iche iche rụọ ọrụ, ihe niile 3 nwere ike yana ọbụna egwuregwu vidiyo, njiri mara, mkpokọta, wdg.
Core i7 ma ọ bụ Ryzen 7
Ọ bụ oke nwere arụmọrụ kachasị elu, maka ndị na-achọ arụmọrụ gbakwunyere. N'ezie, ha dị oke ọnụ karịa nke 5, ma na-erikwa ihe ndị ọzọ ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ n'ogo dị elu yana na cores na-arụsi ọrụ ike. Site na ha ị nwere ike iji sọftụwia dị iche iche na-agba ọsọ ngwa ngwa na nke ọma, site na akpaaka ụlọ ọrụ, mgbasa ozi mgbasa ozi na igodo, site na egwuregwu vidiyo, njiri mara mma, mkpokọta, ndezi, wdg.
Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ ASUS dị ọnụ ala?
Ee n'ezie, Ha bụ kọmpụta nwere ezigbo uru maka ego. Kọmputa ASUS dị ka ụdị ngwaahịa teknụzụ ọ bụla ọzọ anyị nwere ike zụta ya na ọnụahịa akwadoro ya ma ọ bụ maka ihe dị obere. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta kọmpụta ASUS dị ọnụ ala, anyị nwere ike lelee ya ụlọ ahịa dị ka Amazon o Mediamarkt, ọkachamara mbụ n'ụdị akụkọ niile na ọkachamara nke abụọ na ngwa eletrọnịkị. Ụlọ ọrụ abụọ a bụ ndị dike na mpaghara ha ma, dị ka ndị dị otú ahụ, na-ekwurịta ọnụ ahịa dị mma na ụlọ ọrụ ndị na-egosipụta na akwụkwọ ọnụahịa anyị. N'ụzọ doro anya, a nwekwara ike zụta ha ọnụ ala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana m na-ekwu maka ihe abụọ dị mkpa na-enyekarị ezigbo ọrụ mgbe ọ na-ere ahịa.
Asus laptọọpụ maka ọrụ
ASUS nwekwara usoro a kapịrị ọnụ maka ndị na-achọ otu ọrụ, na ọ bụghị naanị maka ndị ọrụ ụlọ ma ọ bụ egwuregwu. Ọkwa kacha atụ aro maka ndị na-achọ ebe ọrụ zuru oke bụ:
Ọ bụ usoro akwụkwọ ndetu nwere CPU dị elu, eserese dị ike, ngagharị dị ukwuu, nke emebere ya maka ndị ọkachamara kachasị ike.
Ụdị ụfọdụ na-agụnye ihuenyo nke abụọ dị ka ihe mmetụ aka (a na-akpọ ScreenPad), iji nye ọrụ dị ukwuu maka ndị na-emepụta ihe, ebe ọ na-ejikọta ọrụ nke omenala omenala na nke ihuenyo mmetụ agba.
Ha bụ akwụkwọ ultrabook adịchaghị, nwere ikike nnwere onwe na ịdị mfe, nke mere na a na-ebuli mmegharị ahụ. Ha nwekwara nnukwu arụmọrụ iji kwalite nrụpụta yana ọtụtụ ọrụ. Ihe ngwọta dị mma maka ndị na-achọ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ n'èzí.
Ụfọdụ n'ime ụdị ha gụnyekwara ScreenPad, na usoro ZenBook Duo gụnyere ọmarịcha ihuenyo mmetụ nke abụọ maka ndị okike n'elu ahụigodo ...
Ọ bụ otu n'ime kọmpụta kacha mma ị ga-eburu gị ebe ọ bụla, emebere ka ọ dị oke ọkụ ma na-enye ike dị elu. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe ngwọta siri ike maka gburugburu azụmahịa ebe ntụkwasị obi bụ ihe kacha mkpa, ebe ọ bụ na a na-ewu ya na nguzogide ọkwa agha.
Ụlọ ọrụ Chromebook
Ngwa ndị a dị ọnụ ala n'ezie, ọ nwere ike ịdị ka ọ bụ naanị maka ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị ọrụ na-achọ ihe bụ isi. Kama, ASUS nwere usoro ahaziri maka gburugburu azụmahịa. Ha na-eji mgbawa nchekwa Titan nke Google, nke na-enye ha mgbakwunye nchekwa dị mkpa na BYOD ma ọ bụ ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Na mgbakwunye, ha nwere sistemụ arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, siri ike ma dịkwa nchebe nke ukwuu, dị ka ChromeOS Google (dabere na Linux), yana ijikọ ọrụ igwe ojii zuru oke nke Google, ka ị nwee data gị mgbe niile ebe ọ bụla ị nọ na nke na-agaghị atụfu ha. , ọbụlagodi na laptọọpụ gị agbajiri ma ọ bụ tụfuo ya. N'aka nke ọzọ, ha na-enyekwa ọmarịcha njem na nnwere onwe, yana ụdị nwere ihuenyo mmetụ na mgbanwe ...
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ ASUS agaghị amalite?
Mbụ anyị ga-aghọta ihe na-eme, ma ọ bụ kama ihe na-adịghị eme. Mgbe a laptọọpụ agaghị ebutu, O nwere ike ịbụ na ihe na-eme n’ezie bụ na ọ bụ anyị na-adịghị ahụ ya, ya bụ, ọ na-amalite, ma enyo akwụsịla. Ọ bụrụ na laptọọpụ ASUS ebidoghị, anyị ga-elele ihe ndị a:
Ọ na-eme mkpọtụ ma ọ bụ ọkụ ọ bụla? Ọ bụrụ na anyị anụ fan ma ọ bụ ihe dị n'ime laptọọpụ, kọmputa agbanyerela. Ọ bụrụ na ihuenyo ahụ egosighi ihe ọ bụla, nsogbu dị na ihuenyo, na njikọ gị ma ọ bụ, na-emekarị, na Kaadị eserese. Ọ bụrụ na ihuenyo ahụ anaghị arụ ọrụ ma anyị bụ obere aka, anyị nwere ike imeghe kọmputa (ọ bụrụ na ọ bụghị n'okpuru akwụkwọ ikike) ma lelee na eriri ndị na-ejikọta efere ahụ na ihuenyo na-agbakọta nke ọma. Anyị nwekwara ike ihicha ebe mgbawa na n'ọnọdụ ụfọdụ enwere ike itinye okpomọkụ na mgbawa kaadị eserese na igwe nkụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-akacha mma iburu ya na ụlọ ọrụ ọkachamara.
Ọ na-agbanye wee gosi ụfọdụ mkpụrụedemede na ihuenyo. Ọ bụrụ na anyị gbanye kọmputa ahụ wee hụ naanị "ngwa ngwa", ọ ga-abụrịrị mebiri ihe nke sistemụ arụmọrụ. Site n'ịghara ikwe ka anyị mee ihe ọ bụla, ọ kacha mma itinye CD ntinye maka sistemụ arụmọrụ, dị ka Windows 10, ma tinyegharịa usoro ahụ.
Ọ naghị azaghachi, ọ dịghị eme ihe ọ bụla. N'okwu a, anyị ga-enyocha ihe ndị ọzọ, mana ị nwere ike ịnwe a nsogbu ngwaike:
Anyị na-elele na ejikọrọ batrị nke ọma. Anyị nwekwara ike wepụ ya wee lelee ma ọ na-agbanye na eriri ọkụ.
Ụdọ ọkụ ahụ ọ dị mma? Ọ bụrụ na anyị nwere ya na ọnọdụ adịghị mma, ọ nwere ike ọ gaghị enye ike zuru ezu iji gbanye akụrụngwa.
Lelee motherboard, CPU na draịvụ ike. Ọ dị ụkọ maka draịva siri ike igbochi kọmputa ịgbanwuo, ma ọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ọ nọ n'ọnọdụ adịghị mma ma kọmputa ahụ chọpụta na ọ nwere ike ịdị ize ndụ iji. N'aka nke ọzọ, ọ nwekwara ike ghara ịgbanwuo ma ọ bụrụ na ọ bụ motherboard ma ọ bụ CPU nke na-adịghị mma udi. N'okwu ndị a, ọ kacha mma iburu ngwá ọrụ ahụ na ọkachamara.
Asus laptọọpụ, echiche m
ASUS bụ a na-eduga ika maka motherboards. E ji àgwà ya na nkà na ụzụ ọhụrụ mara ya. Otú ọ dị, nke a abụghị mgbe nile nkwa nke ịga nke ọma na ngalaba ndị ọzọ, dị ka akwụkwọ ndetu. Ma ikpe nke Taiwanese dị iche iche, ebe ọ bụ na ha jisiri ike nweta nnukwu ngwaahịa na-apụta ìhè maka ọnụahịa na ịdị mma ha.
Laptọọpụ ASUS so na nhọrọ kachasị mma na mkpịsị aka gị, ya mere ha ji dị akwadoro nke ukwuu. Site na ịrụ ọrụ dị ukwuu, ngwaike adịchaghị mma, ọmarịcha imewe, mbugharị, ike siri ike na ntụkwasị obi.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ ASUS
Amazon bụ ụlọ ahịa nke webụsaịtị anyị nwere ibe edokọbara. Ma ọ bụghị naanị n'ihi na kọmputa, ma n'ihi na enwere ihe niile. N'ezie, ọtụtụ ụdị nwere ụlọ ahịa nke ha na Amazon iji ree ngwaahịa ha. Ma ọ bụ na Amazon bụ, na mgbakwunye na ụlọ ahịa, ọrụ na-etinye ndị na-azụ ahịa na kọntaktị na ndị na-ere ahịa. N'aka nke ọzọ, ọ dị oke mkpa na mpaghara ahụ na ọ nwere ikike ịmekọrịta ọnụ ahịa dị mma, nke mere na ọtụtụ ngwaahịa ọ na-enye dị ọnụ ala karịa na ụlọ ahịa ndị ọzọ.
Lelee azụmahịa laptop Asus na Amazon
El Corte Inglés bụ otu n'ime ụlọ ọrụ nke ụlọ ahịa kasị ukwuu na Spain na Portugal. Ha nwere ụlọ ahịa n'ọtụtụ isi obodo, ha niile buru ibu nke anyị ga-ahụ ọtụtụ isiokwu dị iche iche. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịchọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla, El Corte Inglés bụ otu n'ime ụlọ ahịa na-abata n'uche karịsịa mgbe anyị na-eche banyere ịzụrụ uwe ma ọ bụ ngwá electronic, na nke ikpeazụ a bụ ebe anyị ga-ahụ ASUS kọmputa.
Mediamarkt bụ ụlọ ahịa "na-eto eto" na Spen na mba ndị ọzọ, mana kemgbe ọ rutere ma ọ bụ, kama, kemgbe mgbasawanye ya, ọ bụ ụlọ ahịa na-ezo aka na ihe ọ bụla metụtara ngwá electronic. Ma ọ bụ ya bụ ndị ọkachamara na ngwaọrụ eletrọnịkị, ya mere ọ ga-abụrịrị otu n'ime nhọrọ mbụ anyị mgbe anyị na-eche banyere ịzụrụ ụdị ihe ọ bụla dị ka ngwa ngwa ma ọ bụ kọmputa. Na mgbakwunye, ha na-achọkarị ire ihe niile na ọnụ ahịa dị mma, ihe ụkpụrụ ha bụ "Abụghị m onye nzuzu" na-ezo aka na ya.
Carrefour bụ ụlọ ọrụ nkesa mba France nke ama ama maka ụlọ ahịa ngalaba ya. Ha nọ na Spen kemgbe 1972, mgbe ha webatara 'Continent' nke mbụ. Mgbe e mesịrị, ha gbasaa na mba ahụ dum, nweta mkpa na, n'oge na-adịbeghị anya, gbanwere aha ha na Carrefour. N'ebe ahụ, anyị ga-achọta ihe niile, ruo n'ókè nke ahụ anyị nwere ike ịzụ ahịa n'ebe ahụSite na nri gaa na kọmputa gaa na uwe. Na nke kacha mma, ihe niile na ọnụ ahịa dị mma.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Laptọọpụ ASUS